इन्डोर प्लान्टहरू | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
शेफलर झाडी कसरी बनाउने?
कसरी सेफलरलाई बुशमा ल्याउने? म तपाईंलाई इन्टरनेटबाट बताउन जाँदैछु! तपाईंले आफ्नो बोट एक पटक उर्वर गर्न आवश्यक छ, दिनमा दिनमा एक पटक स्प्रे गर्नुहोस्, र त्यसैले प्रत्येक दिन पानी कम, खडा हुनुपर्दछ ...
छातीको ख्याल सुझावहरू
इनडोर चेस्टनटको हेरचाहको लागि सुझावहरू मसँग त्यस्तो चेस्टनट थियो, म तपाईंलाई इन्टरनेटको लिंक बिना नै बताउँछु, यो राम्रोसँग बढ्दछ, गर्मीमा पानी पनी माया गर्दछ, नटलाई दफन गर्नु आवश्यक पर्दैन, जाडोमा यसले केही पातहरू खसाल्दछ।
कलान्कोको लागि कस्तो मिट्टी चाहिन्छ?
Kalanchoe को लागी कस्तो माटो को आवश्यकता छ? कालान्चोको लागि माटो तटस्थ वा थोरै अम्लीय (pH .5,5..6,5--4.)) लिइएको छ। सक्कुलन्टहरूका लागि सामान्य मिश्रणमा बोटहरू राम्रोसँग बढ्छन्। युवा बोटहरू parts भागहरूको मिश्रणमा ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ ...
मरियाको लागि सही हेरविचार के हो? किन बेइमानी फूल थोपा2वर्ष पुरानो सानो मुरामा आइरहेको छ?
मुरयाको लागि उचित हेरचाह के हो। किन अबाधित फूलहरू २ वर्षको सानो मुरायाबाट झर्छन्? वसन्त Iतुमा म कलिका संग एक muraika किनेको। लगभग १० सेन्टीमिटर। फूल उत्पादकहरूको फैसला अस्पष्ट थियो - खिलने छैन। ...
कसरी रित्तो पानी?
अर्किडलाई कसरी पानी दिने? मलाई भनिएको थियो कि यस दलदलमा निरन्तर पानी थप्नु आवश्यक छ र यो निश्चित छ कि त्यहाँ सबै समय छन्, र म त्यसो गर्छु। अर्किड फेरि बनाउन के गर्नु पर्ने यहाँ छ ...
कृपया मलाई बताउनुहोस् कि इनडोर बिरुवाहरु को लागि पराबैंगनी लैंप को उपयोग गर्न को लागी संभव छ?
के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि यदि UV बत्ती घर भित्रका बिरूवाहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? धन्यबाद, मैले युएलएफको बारेमा सिकें, तर के यो टमाटर, खुर्सानी, एगप्लान्ट्स जस्ता बोटहरूको पूरक प्रकाशको लागि DNAT बत्तीहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ? अल्ट्राभायोलेटको प्रयोग ...
फूल फुलाउने किसिमको खाना खाने?
कसरी फल्ने फ्लानोपसिसलाई ठीकसँग फिड गर्ने? फलानोप्सीस - अभूतपूर्व सदाबहार, लगातार बढिरहेको अर्किडहरू; तिनीहरूको प्रजाति र संकर लगभग सबै वर्ष भर खिल शुरुआतीहरूको लागि आदर्श हो। उचित हेरचाहको साथ, फ्लानोपोसिस व्यापक रूपमा खिलिन्छ र लामो समयको लागि ...
मलाई भन्नुहोस् कि यदि खामले सूखा सुझावहरू छोड्छन् भने के गर्ने? के त्यहाँ एक विशेष उर्वरक छ?
मलाई भन्नुहोस् यदि खजूरको रूखको पातहरू को सुझावहरू सुख्खा हुन्छ भने के गर्ने? के त्यहाँ एक विशेष मल छ? मलाई पानीको बारेमा थाहा छैन, तर चौथो पात कसरी खजूरको रूखमा देखा पर्छ, पहिलो सुक्खा सुरु हुन्छ। पर्छ ...
कसरी टाउको दुख्ने? म एक शुरुवातको लागि विस्तृत निर्देशन चाहन्छु।
कसरी स्याकुलन्ट रोप्ने? म एक शुरुआतका लागि विस्तृत निर्देशनहरू चाहान्छु। भाँडो चयन। तपाईंले जाँदै गरेको क्याक्टसको प्रकारको जड प्रणालीको विकासमा निर्भर गर्दै, भाँडाको सही आकार र आकार छनौट गर्न आवश्यक छ।
खतरनाक मरेफेनब्याकिया के हो? किन भनियो यो जहर?
डाइफेनबचिया किन खतरनाक छ? किन यसलाई विषाक्त भनिएको छ? ग्लोभको बारेमा - राम्रो! र श्वसनकर्ता पनि! र अर्को शब्दकोश! मैले पढें कि यसले पुरुष शक्तिहीनताको कारण गर्दछ र बिरालाहरूको लागि धेरै खतरनाक हुन्छ। मेराे बिरालाे…
एउटा टोकरीमा फूलहरू जोगाउन सकिन्छ?
के टोकरीमा फूलहरू पानी हाल्न आवश्यक छ? निश्चित हुनुहोस् हो, निश्चित हुनुहोस्, फूलहरूले पनि पानी पिउँदछन्। तर यो पुन: भर्नु पर्छ। यो पानी गर्न अत्यावश्यक छ !!! टाटियाना, शुभ साँझ! यो हरियो फ्लोरल स्पञ्ज पानीले ढाकिएको हुनुपर्दछ !!
पूँजीहरू फिकसमा मुछिएका छन्
फिकस पातहरु कर्ल यसको लागि धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। रोगहरू हटाउनको लागि, तपाईंले दागहरू र अनियमितताहरूको लागि सावधानीपूर्वक मुisted्गिएको पात जाँच गर्नु पर्छ। यदि तिनीहरू छन् भने, त्यसोभए सम्भवतः तपाईंको फिकस ...
कैक्टस के हो?
यस्तो हरियो क्याक्टस के हो ... काँटीले काँटी रसीला बोटबिरुवाहरू हुन् जसका मांसल डाँठहरू ड्यानी कपालको समूहले ढाकिएका हुन्छन्। प्राय: सबै क्याक्टिमा सामान्य पात हुँदैन, प्राय: काँडाको हुन्छ। तिनीहरू ...
बिरुवामा बढ्दै मौसम कस्तो छ?
बिरुवाहरूको लागि बढ्दो मौसम के हो? विकासको अवधि, सक्रिय बृद्धि। यो प्रश्न पहिले नै यहाँ भएको छ http://otvet.mail.ru/question/17180703 वनस्पति अवधि (ल्याटिन वनस्पति पुनजीवन, वृद्धिबाट) बर्षको अवधि हो जहाँ विकास र विकास सम्भव छ ...
के यो मुद्राको रूखलाई छँटाउन सम्भव छ? धेरै भारी शाखाहरू ... तल झुकाव ... र ब्रेक ...
के तपाईं पैसाको रूखलाई छाँट्न सक्नुहुन्छ? धेरै भारी शाखाहरू ... तल झुकाव ... र ब्रेक ... हार्ड! मेरो हात यस्तो कट्टरपल कपाल का लागि उठ्दैन। निश्चित हुन सक्छ काट्नुहोस् यद्यपि तपाईं चाहनुहुन्छ, यो बाट हो ...
तपाईंलाई क्रसुलाको जवान कचरा चुम्बन गर्न आवश्यक छ?
तपाईंले एक युवा बिरूवा क्रसुला फ्याटी कहिले चिमोटि गर्नुपर्छ? दुईवटा पातहरू बाहिर आउँदा म चुट्छु। मैले मेरो मानक बनाएँ। सामान्यतया, यो कुनै पिन्चिंग बिना हामीसँग बढ्छ ... र के को बारेमा ...
किन पत्ते पहेंलो हुन्छ? यस रोटीको लागि कस्ता हेरविचार चाहिन्छ?
Kalanchoe Kalandiva पातहरु पहेंलो किन हुन्छ? यस बिरुवालाई कस्तो प्रकारको हेरचाह आवश्यक छ? पातहरू पहेंलो हुन्छ र झर्छ वयस्क बोटको तल्लो पातहरू स्वाभाविक रूपमा समयको साथ पहेंलो हुन्छ र त्यसपछि झर्छ। यो कहिले हो ...
बढि कन्नबिसको लागि कुन लैंपहरू प्रयोग गरिन्छ?
भांग उब्जाउनका लागि कुन बत्तीहरू उत्तम हुन्छन्? थप प्रकाशको लागि, बत्ती बालेको उज्यालोका लागि मात्र उपयुक्त छैनन्, तिनीहरू केवल electricity% उपभोग गर्छन् र बाँकी थर्मल रेडिएसन छ। अधिक स्वीकार्य बत्ती विकल्प ...
कस्तो किसिमको बोट "मरोनिंग ग्लोरी" हो
के एक बोट "मरोनिंग ग्लोरी" Ipomoea (Ipomoea Violacea); - परिवार: Convolvulaceae; - सामान्य नाम: Ipomoea; - प्रजाति: वायोलेसिया (मोर्निंग ग्लोरी) - मूल: दक्षिणी मेक्सिकोको पहाड, गुआटामाला, वेस्टइंडीज, र दक्षिणको उष्णकटिबंधीय ...
इनडोर बिरुवाहरूको लागि कुन स्थान उपयुक्त छ?
कुन माटो इनडोर बोटको लागि उत्तम हो? अब स्टोरहरूले बिभिन्न बोटहरूका लागि विभिन्न भूमि मिश्रण बेच्दछन्। प्याकेजहरूमा विवरण पढ्नुहोस्, सबै त्यहाँ संकेत गरिएको छ। त्यहाँ उसको घरपालुवा जनावरको लागि ...
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,157 प्रश्नहरू।